Guia De Semalt: Como Seu Negócio ho an'ny Ser Digital
Ho an'ny mpampiasa, ny vokatra teknolojia vaovao dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana finday tsara tarehy. Ny fanentanana an-tserasera dia natao an-tserasera amin'ny tanjona goavana amin'ny Search Engine Optimization (SEO). Araka ny filazan'ny mpikaroka dia afaka mametraka Internet tahaka ny aterineto any amin'ny sehatry ny varotra ny orinasa, na dia mety hiteraka korontana aza.
Raha te hampisy lahatsary nomerika digital, dia asehoy ireo sehatra hafa, avy amin'ny Oliver King, ny vokatra azo avy amin'ny mpanjifa Semalt.
Ny fitaovana maoderina dia manaloka ny fahasamihafan'ny olombelona. Amin'ny ankapobeny, ny fametrahana amin'ny fomba mahazatra ampiasain'ny mpanjifa. Ny Internet (Coopers) dia manaporofo fa ny 2020, fa 20,8 tapitrisa ny "masinina inteligent" mampiasa Internet amin'ny Internet. Ny fampiasana teknolojia hafa indray dia ny toro-hevitra ara-teknolojika azo ampiasaina toy izao:
Fantatra amin'ny 3D ho an'ny fiarovana fisorohana
APIs Compartilhando izay manome vaovao vaovao an-tserasera
Ny fampiasana fitaovana, toy ny fampahatsiarovana ny sary, ny tarehin-tsoratra fototeny ary ny fandikana refy, pessoalmente
Ny Artificial Inteligência (AI) dia manazava ny fomba fiasan'ny teknolojia maoderina. Mifanaraka amin'ny teknolojia samihafa, ireo mpampiasa ireo hevi-pitenenana mahaliana, miresaka, mampiseho ary manabe ny tontolo iainana..Tsy misy fotoana, ny teknolojia maoderina amin'ny inteligência ny fantsom-panafintohina ny fiaraha-miasa. Ny fanampiana azy ireo dia toy ny fisehoan-javatra, toy ny fampahalalana momba ny valim-panadinana. Tsy misy ny fiaraha-miasa, ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso sy ny fampivoarana ny fampiasana ny vokatra azo.
Ny teolojia dia tena dinamika, indrindra fa ny TI. Ity no lahatsoratra voalohany mampiseho ny zava-misy eto amin'ity pejy ity mba hanamboarana ny vaovao farany ho an'ny hafa. Raha vao nanomboka ny fampiofanana ireo fifanintsanana, toy ny fifanarahana amin'ny maotera maimaim-poana sy ny fampiasana fitaovam-pitaterana an-tsokosoko dia tsy misy vidiny. Ny fitaovam-pifandraisana dia mandray anjara amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny alàlan'ny sehatra fitantanana an-tserasera, toy ny fampivoarana ny fampiofanana. Ity tetezamita ity dia tsy nahomby tamin'ny famerenana ny fiarovana ny tranonkala. A medida que alguns recistem, el seu dever conoceros de sobre un importancia da abordagem y benefícios a longo prazo empresa.
Niditra an-tsokosoko nandritra ny vanim-potoana sy an-davan'andro. Ny vaovao farany dia natao mba hanatsarana ny fahafahana mampiasa Internet sy ny orinasa mpamokatra herinaratra. Noho ny ohatra, tsy an-trano ny fitaovana, ny tranonkala dia mampiseho ny fahaiza-mana-kevitr'ireo traikefa izay mamolavola ny fifanarahana ho azy ireo. Ny fiara fitaterana tahaka ny Google dia ny fahafahana mialoha ny lisitry ny zavatra izay efa azonao. Raha ny tena izy, ny tatitra an-tserasera dia manazava ny aterineto momba ny sary mampiseho ny famerenana ny mercado.
Rehefa mandefa mailaka amin'ny alàlan'ny fividianana ireo mpanjifa vaovao. Amin'ny alalàn'ny SEO, ireo mpampiasa aterineto dia miezaka manova ny marika, maka ny safidy mba hisoratana ny SERPs mba hamaritra ny fifandraisana eo amin'ny sehatr'asa. Ity tranonkala ity dia ny fampiroboroboana ny Internet. Todo negócio está tentá tentando alcançar esse efeito. Ny fikambanana dia nanapa-kevitra ny hanangana ny sehatry ny digital digitale amin'ny alàlan'ny fananganana krizy izay mety ho an'ny mpandraharaha Source .